साधना लघुवित्तकाे सेयरमूल्य समायोजन, कतिमा खुल्छ काराेबार ? - Arthasansar
साधना लघुवित्तकाे सेयरमूल्य समायोजन, कतिमा खुल्छ काराेबार ?
बुधबार, ०३ कार्तिक २०७८, ०६ : ५५ मा प्रकाशित
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकाे सेयरमूल्य समायोजन भएको छ ।
संस्थाकाे २५ प्रतिशत बाेनस सेयर पछि नेप्सेले प्रतिकित्ता एक हजार ४ सय १५ रूपैयाँ २० पैसा कायम हुने गरी सेयरमूल्य समायोजन गरेको हाे । नेप्सेले मंगलबारकाे अन्तिम कारोबार मूल्य एक हजार ७ सय ६९ रुपैयाँका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो ।
संस्थाकाे पाचाैँ वार्षिक साधारण सभा कार्तिक १३ गते शनिबार होटल गोरखा बिसौनी गोरखामा हुँदैछ ।
सभामा संस्थाकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले गरेकाे निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३१ प्रतिशत नगद गरी कुल २६.३१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।